नेइमारले बार्सिलोना छोडेपछि स्वरेजको प्रदर्शन खस्कियो !
२o७४ मङ्सिर १९ मंगलबार
काठमाडौं । बार्सिलोनाका उरुग्वियन स्ट्राइकर लुइस स्वरेज यस सिजनमा गरिरहेको संघर्षका कारण क्लबलाई असर पर्न थालेको छ ।
सन् २०१४ मा लिभरपुलबाट बार्सिलोना गएका स्वरेजले तीन सिजनमा पहिलो पटक गोल गर्न संघर्ष गरिरहेको पाइएको छ ।
अघिल्ला तीन सिजनमा स्वरेजको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको थियो । बार्सिलोना आएको पहिलो सिजनमा स्वरेजले बार्सिलोनाका लागि ला लिगामा २७ खेल खेल्दै १६ गोल गरेका थिए भने दोस्रो सिजनमा ३५ खेलमा ४० गोल गरेका थिए । त्यस्तै अघिल्लो सिजनमा पनि ३५ खेल खेल्दै २९ गोल गरेका थिए । यस सिजनमा स्वरेजको प्रदर्शन हेर्ने हो भने उनले बार्सिलोनाका लागि ११ खेल खेल्दै ६ गोल गरेका छन् ।
अझ ला लिगा बाहेकका अन्य ७ खेलमा यस सिजनमा स्वरेजले गोल गर्न सकेका छैनन् । यसरी यस सिजनमा स्वरेजले बार्सिलोनाका लागि खेलेका कुल १८ खेलमा केबल ला लिगाका ६ गोल मात्र छन् ।
अहिले नेइमारले बार्सिलोना छोडेपछि स्वरेजको प्रदर्शन खस्किएको अनुमान गर्न थालिएको छ । नेइमार हुँदा स्वरेजको गोल औसत प्रति खेल एक गोलको थियो तर नेइमार बिना स्वरेजको औसत गोल प्रति खेल ०.५४ रहेको छ । जबकी अघिल्ला सिजनमा यो औसत लगभग हरेक खेलमा एक गोलको रहेको थियो । यस सिजनमा स्वरेजले गरेको गोल हेर्दा स्वरेजले ६ गोलका लागि ४० सट हानेका छन् ।
स्वरेजको अर्को समस्या मेसी खेल्ने ठाउको पनि देखिएको छ । मेसी यस सिजनमा धेरै जसो सेन्ट्रल पोजिशनमा खेलेको देखिएको छ जबकी यस अघि स्वरेज खेलेको देखिन्थ्यो । स्वरेजका लागि बार्सिलोनामा अब नयाँ पोजिशनबाट खेल्न र त्यँहाबाट रिजल्ट निकाल्न मुस्किल भइरहेको देखिएको छ ।
स्वरेजको घुडाको इन्जुरिले उनको खेलमा अवस्य असर गरेको छ तर नेइमारको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने गोलमा कमि आएको भने प्रष्ट देखिएको छ ।
मेसी अहिले ला लिगामा शिर्ष गोलकर्ता रहेका छन् तर स्वरेज भने नेइमारको अनुपस्थितिबाट सबैभन्दा बढी असर पुगेका पिडित जस्तो देखिएको छ ।
काठमाडौँ । जापानका मेसी उपनामले चर्चित युवा जापानिज मिडफिल्डर टेकेफुसा कुबो स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडबाट खेल्ने भएका छन् । १८ बर्षिय कुबोलाई रियलले अनुबन्ध गर्ने घोषणा गरेको हो । जापानको राष्ट्रिय
काठमाडौँ । लगातार विवाद र इन्जुरीको समस्याले ग्रसित ब्राजिलका फुटबलर नेइमारको मुल्यमा ८० मिलियन युरोले कमी आएको छ । खेलाडीको ब्राण्ड भ्यालुसम्बन्धि अध्ययन गर्ने संस्था सिआईइएस फुटबल अब्जरभाटोरीले जारी गरेको रिपोर्टमा
ग्रीजम्यानको सट्टा नेइमारलाई ल्याउने मेसीको चाहना !
काठमाडौँ । यस सिजनका सबै जसो प्रतियोगिता सकिए पछि अब विश्व फुटबल बजारमा खेलाडीको ट्रान्सफरले फुटबल प्रेमीको कौतुहलता बढाएको छ । बार्सिलोना, रियल म्याड्रिड, म्यानचेस्टर युनाइटेड, पिएसजी जस्ता ठुला क्लबले विश्वका
सर्जियो रामोसलाई भित्राउन लिभरपुलको 'सरप्राइज' प्रस्ताव !
काठमाडौँ । रियल म्याड्रिडका कप्तान सर्जियो रामोसले क्लब छाड्न सक्ने सम्भावना रहेको मिडिया रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलले रामोसलाई भित्राउने इच्छा व्यक्त गरको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार लिभरपुलले